December 01 ရက်နေ့တုန်းက GMM TV ဟာ ၂၀၂၂ မှာ ပြသသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းသစ်များကို ထုတ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာတော့ “Astrophile” ဟာ လူအများရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီး မထွက်ခင်ကတည်းက ကြည့်မယ့်သူများတန်းစီနေခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီး BL မင်းသားငယ် Bright Vachirawit ဟာ အလွတ်တမ်းထိပ်တန်းမင်းသမီး Mai Davika နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်တွဲဖက်ပြီး “Astrophile” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ပုံပြင်ဆန်လှပါတယ်။ Kimhan (Bright) ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ညတိုင်း ကောင်းကင်ကြီးကကြယ်တွေကို မိုးလင်းပေါက်တဲ့အထိ ရေတွက်ရင်း အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့ရဲ့အချစ်ဦးအကြောင်းကို အတွေးနယ်ချဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့အချစ်ဦးဟာ Nubdao (Mai Davika) လို့ ခေါ်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီး သူမအကြောင်းလေးကို တစွန်းတစ သိခွင့်ရလာပါတော့တယ်။
Nubdao ဟာ အွန်လိုင်းကနေ ပစ္စည်းတွေက ရောင်းချတဲ့ အွန်လိုင်းဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမမှာတော့ ယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးရတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းကောင်‌လေးရှိပြီး တဖက်မှာလည်း သူမကို တရက်ပြီးတရက် ရင်ခုန်အောင်ပြုစားလာတဲ့ Kimhan နဲ့ တွေ့ဆုံလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Nubdao တစ်ယောက် နှလုံးသားမှာ အချစ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာချိန်… ဘယ်သူ့ကို ရွေးချယ်လိုက်မလဲ?
အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းလား… ဒါမှမဟုတ် ရင်ခုန်အောင်ပြုစားနိုင်သူကိုလား? Kimhan ကကော သူ့အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်နေရတဲ့အချစ်ဦးအား ဘဝကြီးအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ဘယ်လိုတွေ ခြွေမလဲ ဆိုတာကို ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းစွာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကဇာတ်လိုက်တွေအဖြစ် Bright Vachirawit, Mai Davika နဲ့ Off Jumpol တို့က ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာဦးမှာသေချာပါတယ်။ ၂၀၂၂ ထဲမှာ ပြသဖို့တော့ ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်လို့ လတ်တလော Bright ရဲ့ F4 Thailand ကို ကြည့်ရှုရင်း စောင့်မျှော်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Next သရေဖျက်ကာ မတရားစွပ်စွဲခံရတဲ့ Zhang Zhehan အတွက် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စတင်ဆောင်ရွက် »
Previous « "Euphoria" သီချင်းနဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင်စံချိန်သစ် စိုက်ထူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Jungkook